Musharaxiinta oo war ka soo saaray Go’aankii Farmaajo.
Midowga Musharaxiinta oo soo dhoweeyay in Ra’iisul Wasaare Rooble uu si buuxda ula wareegay maamulka doorashooyinka iyo amniga dalka, diyaar u yihiin in Ra’iisul Wasaaraha kala shaqeeyaan qabsoomida doorasho xor iyo xalaal ah, kuna dhaca waqtiga ugu dhow.
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa ugu baaqay ra’iisul wasaare Rooble inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha doorashooyinka,uusana la safan dhinac ka mid ah dhinacyada tartamaya.
« Farmaajo oo Awoodii dalka ku wareejiyay Rooble.
Wafdigii Dowladda Qadar ee Soo gaaray Muqdisho ayaa kulan la qaaday Madaxda dowladda. »